निषेधाज्ञा अवधिभर एउटा बैंकले उपत्यकाभित्र ८ वटा शाखा खोल्न पाउने – RemitKhabar
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा बुधबार रातिदेखि लागू हुने भनिएको निषेधाज्ञा अवधिभर एउटा बैंकले उपत्यकाका ३ जिल्लामा ८ वटा मात्रै शाखा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका हुन् । बुधबार वाणिज्य बैंकहरुको संघ बैंकर्स संघमा भएको बैठकमा यस्तो सहमति गरेका हुन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्दै सेवाग्राहीलाई सेवा दिन वाणिज्य बैंकहरुले सो सहमति गरेका हुन् ।
सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण उपत्यकामा तिव्र भएपछि साताभरका लागि निषेधाज्ञा घोषणा भइसकेको छ । उक्त अवधिभर राष्ट्र बैंकले न्यूनतम कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएसँगै नेपाल बैंकर्स संघले उक्त सहमति गरेको हो ।
निषेधाज्ञा अवधिमा यसरी सञ्चालन हुनेछन् बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्मचारीलाई पास नचाहिने
‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई पालना गर्दै न्यूनतम कर्मचारीबाट सीमित शाखाबाट मात्र सेवा प्रवाह गर्ने सहमति भएको छ,’ संघका सीइओ अनिल शर्माले भने, ‘आवश्यकता भएमा सोभन्दा बढी वा घटी पनि शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न बैंकहरुलाई अवरोध संघबाट हुने छैन, तर तोकिएको स्वास्थ्यका मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्छ ।’
भोलि रातिदेखि भदौ १० गतेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा
एक हप्तासम्म उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकले काठमाडौंमा ५ वटा, ललितपुरमा २ वटा र भक्तपुरमा एउटा मात्रै शाखा खोल्ने सहमति गरेको उनले जानकारी दिए ।
उपत्यकामा लकडाउन २.०, के गर्न पाइन्छ ? के पाइँदैन ?
सरकारको निर्णयअनुसार बैंकहरुले कर्मचारीले कार्यालयको फोटोसहितको परिचयपत्रको आधारमा आवतजावत गर्न पाउनेछन् ।
कोरोना संक्रमण बढिरहेको हुँदा ग्राहकलाई डिजिटल नै सेवा दिने प्रायः बैंकहरुको हुने संघका सीइओ शर्माले बताए । खोलिएका शाखा कार्यालयबाट सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा ग्राहकले पाउने उनले जानकारी दिए ।